သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်တဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ၀မ်းသာနေရှာတဲ့ ယုန်လေး - RealThadin
သိန်းတစ်သောင်းခွဲပေါက်တဲ့ သူငယ်ချင်းအတွက် ၀မ်းသာနေရှာတဲ့ ယုန်လေး
ဒီနေ့ သြဂုတ်လ(၁) ရက်နေ့မှာတော့ (၁၈) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးသိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီးကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့မှ ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
တာမွေမြို့နယ်က ကိုကျော်စွာက ဆွတ်ခူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယုန်လေးကတော့ ကံကောင်းလွန်းတဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဆီသွားကာ ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားရင်း ပရိသတ်ကိုပါ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
” ဒီနေ့ ထီ သိန်း ၁သောင်းခွဲ ပေါက်ပါပြီ… ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူး ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း … ဘာပဲ ပြောပြော ရန်ကုန် ကလူတွေ ကံပွင့်လာပြီ ….
ကိုယ်တွေများ (၅) သောင်း ဆုကို (၂) နှစ် နေလောက်မှ တစ်ခါပေါက်တယ်….
သူနားနည်းနည်း သွားပြီး ကံကောင်းတဲ့ ဓာတ်တွေ လာယူတာ .ဂုဏ် ယူပါတယ် . ကံထူးရှင်ကြီး ကိုကျော်စွာ ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ ပုံရိပ်လေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေ့ သွဂုတျလ(၁) ရကျနမှေ့ာတော့ (၁၈) ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီကို ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီဖွဈပွီး အမွငျ့ဆုံးသိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီးကိုတော့ ရနျကုနျမွို့မှ ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
တာမှမွေို့နယျက ကိုကြျောစှာက ဆှတျခူးခဲ့တာဖွဈပွီး ယုနျလေးကတော့ ကံကောငျးလှနျးတဲ့ သူ့ရဲ့သူငယျခငျြးဆီသှားကာ ဂုဏျပွုစကားပွောကွားရငျး ပရိသတျကိုပါ မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
” ဒီနေ့ ထီ သိနျး ၁သောငျးခှဲ ပေါကျပါပွီ… ကြှနျတျောမဟုတျဘူး ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး … ဘာပဲ ပွောပွော ရနျကုနျ ကလူတှေ ကံပှငျ့လာပွီ …. ကိုယျတှမြေား (၅) သောငျး ဆုကို (၂) နှဈ နလေောကျမှ တဈခါပေါကျတယျ…. သူနားနညျးနညျး သှားပွီး ကံကောငျးတဲ့ ဓာတျတှေ လာယူတာ .ဂုဏျ ယူပါတယျ . ကံထူးရှငျကွီး ကိုကြျောစှာ ” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ သူငယျခငျြးဖွဈသူနဲ့ ပုံရိပျလေးကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
သိနျးတဈသောငျးခှဲဆုကွီးကတော့ နယျတှမှော အမြားဆုံးပေါကျလရှေိ့တဲ့အပွငျ ဒီတဈခေါကျမှာတော့ ရနျကုနျမှာပေါကျရုံမက သူငယျခငျြးအရငျးကွီးက ကံထူးသှားတာကွောငျ့ ယုနျလေးကတော့ ဝမျးသာဂုဏျယူစှာ မြှဝခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ…
Source – Yone Lay , Cele Gabar
ဆင်းရဲပေမယ့် သူများ ပိုက်ဆံအလကား မလိုချင်တဲ့ ပန်းရောင်းတဲ့ ကောင်လေးရဲ့ချီးကျူး လေးစားစရာစိတ်ဓာတ်
သင့်ရဲ့ ရှယ်တစ်ချက်ကြောင့် အလှူရှင်တစ်ဦးပေါ်ခဲ့ရင် အဆုံးမရှိတဲ့ ကုသိုလ်ထူးရနိုင်ပါသည်